Izabelo zeGeographical of Captain Cook - 1728-1779
UJames Cook wazalwa ngo-1728 eMarton, eNgilani. Uyise wayengumsebenzi wasefama waseScotland owayefudukayo owamvumela ukuba uYakobi afunde amaqhekeza angamalahle angama-18. Ngoxa wayesebenza eNxweme yaseNyakatho, uPike wasebenzisa ixesha lakhe lokukhulula ukufunda izibalo kunye nokuhamba. Oku kwaholela ekuqeshweni kwakhe njengomlingane.
Ukukhangela enye into ehamba phambili, ngo-1755 wazinikela kwi-Royal Royal Navy kwaye wabamba inxaxheba kwiMfazwe Yiminyaka Yesixhenxe kwaye yayiyinxalenye ebalulekileyo yokuhlola iSt.
Lawrence River, eyasiza ekuthinjweni kweQuebec kwiFrentshi.
Uhambo lokuqala lokuPheka
Ukulandela imfazwe, ikhono likaPheka lokuhamba kunye nomdla kwi-astronomy yamenza waba ngumviwa ogqwesileyo ukukhokela uhambo olulungiselelwe yiRoyal Society kunye neRoyal Navy ukuya eTahiti ukuze kugcinwe uhambo olungapheliyo lweVenus ebusweni belanga. Imilinganiselo echanekileyo yale mcimbi yayifunekayo kwihlabathi jikelele ukwenzela ukuchonga umgama ochanekileyo phakathi komhlaba nelanga .
UCheka wahamba ngomkhumbi esuka eNgilandi ngo-Agasti, ngo-1768 kwi-Endeavor. Ukuma kwakhe kokuqala kwakuyiRio de Janeiro , ngoko i-Endeavor yahamba ngasentshonalanga eTahiti apho kwakhiwa khona ikampu kwaye ukuhamba kweVenus kwalinganiswa. Emva kokumisa eTahiti, uChake wayala ukuba ahlole kwaye athathe izinto ezifunekayo eBritani. Watshintsha i-New Zealand kunye nolunxweme lwaseMpuma ye-Australia (eyaziwayo njengeNew Holland ngexesha).
Ukusuka apho waya e-East Indies (i-Indonesia) nakwi-Ocean yonxweme ukuya kwiCape of Good Hope kummandla osezantsi we-Afrika.
Kwakukho uhambo olulula phakathi kwe-Afrika kunye nekhaya; ukufika ngoJulayi, 1771.
Uhambo lwe sibini lokuPheka
I-Royal Navy ikhuthaze uJames Cook kuCaptain emva kokubuya kwakhe kwaye wayenomsebenzi omtsha kuye, ukufumana iTrara Australis Incognita, umhlaba ongasentla owaziwayo. Ngekhulu le-18, kwakukholelwa ukuba kwakukho umhlaba ongaphantsi kwe-equator kunokuba sele sele ufumene.
Uhambo lokuqala loPeke aluzange luchasane namabango omhlaba omkhulu kufuphi ne-South Pole phakathi kweNew Zealand kunye neMzantsi Melika.
Iinqanawa ezimbini, iSigqibo kunye ne-Adventure ziye zaphela ngoJulayi, 1772 zaza zafika eKapa nje ngexesha leli lizwe lasezantsi. UCaptain James Cook wasuka e-Afrika esuka e-Afrika waza waphenduka emva kokuhlangabeza ubuninzi bepakethe ehambayo (icebo langaphakathi kwe-Antarctica). Emva koko waya ngomkhumbi waya eNew Zealand ebusika kwaye ehlotyeni waya ngasentla waya ngaphaya kwe-Antarctic Circle (66.5 ° South). Ngokujikeleza amanzi asezantsi e-Antarctica, wayenokuqiniseka ukuba akukho ndawo ihlala kwilizwekazi elisezantsi. Ngethuba lohambo, wafumanisa iintambo ezininzi zesiqithi e- Pacific Ocean .
Emva kokuba uKaputeni Cook abuyele eBrithani ngoJulayi, ngo-1775, wakhethwa ukuba abe ngumhlobo weRoyal Society kwaye wafumana inhlonipho ephakamileyo yokuhlola kwakhe. Ngokukhawuleza izakhono zeCook ziza kusetyenziswa kwakhona.
Uhambo lwesithathu lweCook
Umlambo wamaNavy wayefuna ukuCheka ukuba aqinisekise ukuba kukho i- Northwest Passage , umzila wamanzi owawuza kuvumela ukuhamba phakathi kweYurophu kunye ne-Asiya ngaphesheya kweMntla Melika. UChoke uqale ngoJulayi ka-1776 waza wajikeleza isantya sasezantsi sase-Afrika waza waya empumalanga ngaphesheya kweLwandle lwaseNdiya .
Wadlulela phakathi kweziqithi zaseNyakatho naseMzantsi eziseNew Zealand (ngeCrep Strait) kunye noonxweme lwaseNyakatho Melika. Wahamba ngomkhumbi wendlela eya kuba yi-Oregon, eBritish Columbia naseAlaska waza wahamba ngeBering Straight. Ukuhamba kwakhe kweLwandle lwaseBering kwagqitywa yi-icectic engenakwenzeka.
Xa esaphinda efumanisa ukuba into engekho, waqhubeka nohambo lwakhe. Ukuphela kokugqibela kukaCaptain James Cook kwaba ngoFebhuwari, ngo-1779 kwiiSandwich Islands (eHawaii) apho wabulawa ekulweni nabahlali besiqithi ngokuphanga kwesinqanawa.
Ukuhlolwa kweCook kwandiswe ngokukhawuleza ulwazi lweYurophu kwihlabathi. Njengomphathi weenqwelo kunye nomdwebi we-cartographer, wagcwalisa ezininzi kwiimephu kwiimephu zehlabathi. Igalelo lakhe kwisayensi yesayensi yeshumi elinesibhozo incedisa ukuqhubela phambili ukuhlola kunye nokufumanisa kwizizukulwana ezininzi.
Iibhanki eziCwangcisiweyo zokudlala iVans Vans ngokupheleleyo
Iipopayi eziyi-10 eziphezulu ze-Post-Rock
Oko Okufanele Uyazi Ngokubamba iiWalley